Izindlela Zokuxazulula I-4014 Iphutha ku-iTunes
Ungasusa kanjani umculo kusuka ku-iPhone nge-iTunes
Ngokokuqala ngqa esebenza ku-iTunes, abasebenzisi banezinkinga ezihlukahlukene ezihlobene nokusetshenziswa kwemisebenzi ethile yalolu hlelo. Ngokuyinhloko, namuhla sizobheka ngokucophelela umbuzo wokuthi ungasusa kanjani umculo kusuka ku-iPhone yakho usebenzisa i-iTunes. I-iTunes iyimidiya ethandwayo ehlanganisa inhloso yakhe enkulu ukuphatha amadivayisi we-Apple kwikhompyutha.
Ungasusa kanjani uhlu lwadlalwayo ku-iTunes
Ukuze kube lula ukuhlela umculo wamadivaysi ahlukahlukene e-Apple, ukhetha amathrekhi ngokwendlela yakho yomzwelo noma uhlobo lomsebenzi, i-iTunes inomsebenzi wokudala uhlu lwadlalwayo okuvumela ukuthi udale uhlu lwadlalwayo lomculo noma ukurekhoda kwevidiyo lapho ungakwazi ukwenza khona kokubili amafayela kuhlu lwadlalwayo bese ubabuza oda oyifunayo.
Indlela yokudlulisa izithombe kusuka ku-iPhone, i-iPod noma i-iPad kukhompyutha
I-ITunes yimidiya ethandwayo ihlanganisa amakhompiyutha asebenzisa i-Windows ne-Mac OS, evame ukusetshenziswa ukulawula amadivayisi we-Apple. Namuhla sizobuka indlela yokudlulisa izithombe kusuka kudivayisi ye-Apple kuya kwikhompyutha. Ngokujwayelekile, i-iTunes ye-Windows isetshenziselwa ukuphatha amadivayisi we-Apple.
Izindlela Zokulungisa Iphutha 21 ku-iTunes
Abasebenzisi abaningi sebezwile ngekhwalithi yemikhiqizo ye-Apple, noma kunjalo, i-iTunes ingenye yalezi zinhlobo zezinhlelo cishe cishe wonke umsebenzisi, ngenkathi esebenzelana nazo, uhlangabezana nephutha emsebenzini. Lesi sihloko sizoxoxa ngezindlela zokuqeda iphutha 21. Iphutha 21, njengombuso, livela ngenxa yokulimaza kwe-hardware yedivayisi ye-Apple.
IPhone ayikwazi ukubuyiselwa nge-iTunes: izindlela zokuxazulula inkinga
Ngokuvamile, i-iTunes isetshenziselwa ikhompyutha ngabasebenzisi ukuphatha amadivaysi e-Apple, isibonelo, ukwenza inqubo yokutakula. Namuhla sizobuka izindlela ezisemqoka zokuxazulula inkinga lapho i-iPhone, i-iPod noma i-iPad ingabuyiselwa nge-iTunes. Kungaba nezizathu eziningana zokungakwazi ukubuyisela idivayisi ye-Apple kwikhompyutha, kuqala nge-banal version esiphelelwe yisikhathi ye-iTunes nokuphela ngezinkinga ze-hardware.
Indlela yokufaka isicelo se-iPhone nge-iTunes
Ama-IOS-amadivayisi ayaphawuleka, okokuqala, ngokukhethwa okukhulu kwezemidlalo eliphezulu nezinhlelo zokusebenza, eziningi zazo ezikhethekile kule platform. Namuhla sibheka indlela yokufaka izicelo ze-iPhone, i-iPod noma i-iPad nge-iTunes. I-ITunes yinkambo yekhompuyutha ethandwayo evumela ukuthi uhlele umsebenzi kukhompyutha nazo zonke izinsiza ezikhona ze-Apple.
I-ITunes iyithuluzi lokuphatha amadivayisi we-Apple kusuka kukhompyutha. Ngalolu hlelo ungasebenzisa yonke idatha kudivayisi yakho. Ngokuyinhloko, kulesi sihloko sizobuka indlela ongasusa ngayo izithombe kusuka ku-iPhone yakho, i-iPad noma iPod Touch ngokusebenzisa i-iTunes.
Iphutha lokuxazulula izinkinga 54 ku-iTunes
Izinhlobo ezahlukene zezinkinga kulesi sizathu kubangela ukuhluleka okuholela emaphutha. I-ITunes inezinhlobonhlobo eziningi zamaphutha, kodwa, ngenhlanhla, iphutha ngalinye linekhodi yalo, okwenza kube lula ukulungisa inkinga. Ngokuyinhloko, lesi sihloko sizoxoxa ngephutha ngekhodi 54.
Izindlela zokuxazulula iphutha 1671
Ngenqubo yokusebenza ne-iTunes, abasebenzisi abaningi bangase bahlangane ngezikhathi ezithile amaphutha ahlukene, okunye okuhambisana nawo ikhodi yayo. Ngakho-ke, namhlanje sizoxoxa mayelana nendlela yokulungisa iphutha ngekhodi 1671. Ikhodi yephutha 1671 kwenzeka uma kunenkinga ekuxhumaneni phakathi kwedivayisi yakho ne-iTunes.
Izindlela Zokulungisa Iphutha 2009 ku-iTunes
Kungakhathaliseki ukuthi siyayithanda noma cha, sihlangana ngezikhathi ezithile amaphutha ahlukahlukene lapho sisebenza ne-iTunes. Iphutha ngalinye, njengombuso, lihambisana nenombolo yalo ehlukile, evumela ukuthi kube lula inkinga yokuqedwa kwayo. Lesi sihloko sizoxoxa ngekhodi yephutha 2009 lapho isebenza ne-iTunes.
Izindlela Zokulungisa Iphutha 3014 ku-iTunes
I-ITunes yimidiya ethandwayo ehlangene esetshenziselwa ukusebenza namadivayisi we-Apple kwikhompyutha. Ngeshwa, umsebenzi kulolu hlelo awunakwenzeka njalo ukuphumelela uma iphutha ngekhodi ethile likhonjiswa esikrinini. Lesi sihloko sizoxoxa ngezindlela zokuxazulula iphutha 3014 ku-iTunes.
Ungasusa kanjani umculo kusuka ku-iTunes
Ezimweni eziningi, i-iTunes isetshenziselwa ukugcina umculo ongalalelwa ohlelweni, kanye nokukopishwa kumadivayisi we-Apple (i-iPhone, i-iPod, i-iPad, njll). Namuhla sizobuka ukuthi ungasusa kanjani wonke umculo owengeziwe kulolu hlelo. I-ITunes iyinkimbinkimbi ye-multifunctional engasetshenziswa njengesidlali semidiya, ikuvumela ukuthi usebenzise ukuthenga ku-iTunes Store futhi, ngokuqinisekile, vumelanisa amagajethi we-apple nekhompyutha yakho.
Iphutha "Umfakisi ufinyelele amaphutha ngaphambi kokuhlela kwe-iTunes" uma ufaka i-iTunes
Sisesayithi lethu sesivele sibheke inani elilinganayo lamaphutha ahlukahlukene avela ohlelweni lokusebenzisa i-iTunes. Namuhla sizokhuluma ngenkinga ehlukile, okungukuthi uma umsebenzisi ehluleka ukufaka i-iTunes kwikhompyutha ngenxa yephutha le-pop-up "I-installer ithole amaphutha ngaphambi kokuhlela kwe-iTunes".
Indlela yokuxazulula iphutha 9 uma usebenza ne-iTunes
Lapho usebenzisa iTunes kukhompyutha, umsebenzisi angase ahlangane namaphutha ahlukahlukene enza kube nzima ukuqedela umsebenzi. Namuhla sizohlala phezu kwephutha ngekhodi 9, okungukuthi, sizohlaziya izindlela eziyinhloko ezivumela ukuthi ziqedwe. Njengomthetho, abasebenzisi begajethi ye-apple bahlangabezana nephutha ngekhodi 9 uma kubuyekezwa noma kubuyiselwa idivayisi ye-Apple.
Izindlela Zokuxazulula Iphutha 4005 ku-iTunes
Njenganoma iyiphi enye uhlelo lwe-Windows, iTunes ayivikelwe ezinkingeni ezihlukahlukene emsebenzini. Njengomthetho, inkinga ngayinye ihambisana nephutha ngekhodi yayo eyingqayizivele, okwenza kube lula ukuyiqonda. Indlela yokuqeda iphutha le-4005 ku-iTunes, funda isihloko. Iphutha le-4005 livame ukwenza inqubo yokubuyekeza noma yokubuyisela idivayisi ye-Apple.
I-iTunes ayiboni i-iPhone: izimbangela eziyinhloko zenkinga
Njengomthetho, iningi labasebenzisi basebenzisa i-iTunes ukubhangqa idivayisi ye-Apple enekhompyutha. Kulesi sihloko sizozama ukuphendula umbuzo walokho okufanele ukwenze uma iTunes ingaboni i-iPhone. Namuhla sizobuka izizathu eziyinhloko ngenxa yokuthi iTunes ayiboni idivayisi yakho.
Indlela Yokulungisa iPhone, iPad noma iPod nge-iTunes
Uma kuphakama izinkinga ekusebenziseni idivayisi ye-Apple noma ukuze uyilungiselele ukuthengiswa, i-iTunes isetshenziselwa ukwenza inqubo yokutakula evumela ukuthi ubuyekeze i-firmware kudivayisi, okwenza idivayisi ibe ihlanzekile njengoba itholakala ngemuva kokuthenga. Ukuze ufunde ukubuyisela i-iPad namanye amadivayisi we-Apple nge-iTunes, funda isihloko.
Indlela yokuxazulula inkinga ye-2003 ku-iTunes
Amaphutha lapho usebenza ne-iTunes yinto evamile kakhulu, futhi ake sithi, into engathandeki kakhulu. Noma kunjalo, ukwazi ikhodi yephutha, ungakwazi ukuqonda ngokunembile imbangela yalokho okwenzeka khona, ngakho-ke, ukulungisa ngokushesha. Namuhla sizoxoxa ngephutha ngekhodi 2003. Iphutha ngekhodi 2003 livela kubasebenzisi be-iTunes uma kunezinkinga nokuxhumeka kwe-USB kwikhompyutha yakho.
Indlela yokubuyekeza iTunes kwikhompyutha yakho
Ngokuqinisekile noma iyiphi isofthiwe ngokuhamba kwesikhathi ithola izibuyekezo okufanele zifakwe. Ekuboneni kokuqala, ngemuva kokuvuselela uhlelo, akukho lutho olushintshayo, kodwa isibuyekezo ngasinye siletha izinguquko ezibalulekile: izimbobo zokuvala, ukuthuthukisa, ukwengeza ukuthuthukiswa, okubonakala kungenakwenzeka emehlweni.
Indlela yokulungisa iphutha le-iTunes nge-iTunes Library.itl
Njengomthetho, izinkinga eziningi zomsebenzi we-iTunes zixazululwa ngokubuyisela ngokuphelele uhlelo. Kodwa-ke, namuhla kuzoba khona isimo lapho iphutha lomsebenzisi "iTunes Library.itl" lingaqondakali esikrinini somsebenzisi lapho kuqaliswa i-iTunes, njengoba idalwe inguqulo entsha ye-iTunes.
https://termotools.com zu.termotools.com © ITunes 2019